बामदेव गौतमको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानकाे अवधारणपत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ) « Drishti News
काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित हुँदा तथस्ट बसेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ‘एकता राष्ट्रिय अभियान’ घोषणा गरेका छन् ।
ललितपुरको धोबीघाटस्थित सिद्धार्थ कटेजमा औपचारिक कार्यक्रम गौतमले ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
एकता राष्ट्रिय अभियान’ घोषणा गरेका हुन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुनर्एकीकरण गराउन कोशिस गर्ने, प्रत्येक टोल टोलमा एकता पक्षधरको भेला बैठक आयोजना गरी विभाजनबाट हुने क्षति बारे जानकारी गराउने, आम मतदातासमक्ष एकताको अनिवार्यता र आवश्यकताबारे जानकारी गराउने लगायत अभियानका मुख्य कार्यभार रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । नेपाल
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता राष्ट्रिय अभियान’को अवधारणापत्रको पूर्णपाठ–
कानूनी रुपमा विभाजन नभइ सकेको अवस्थामा दुबै नेताहरु अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का आधिकारिक प्रतिनिधि हामी हौं भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा दावी गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले अन्तिम प्रहार गर्नु पूर्व पार्टीको एकतालाई जोगाउँदै नेतृत्व तहमा देखापरेका कार्यशैलीसंग सम्बन्धित अन्तरविरोध हल गर्ने तर्फ गम्भीरता पूर्वक लाग्न चाहनु भएन । झण्डै १० लाख पार्टी सदस्यहरुको कुरै नगरौं अविश्वास प्रस्ताव र प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सम्बन्धमा ९ जना सदस्य रहेको तथा पार्टीको मुख्य नेतृत्व (Core of Leadership) रहेको सचिवालयलाई जानकारीसम्म पनि दिन आवश्यक ठान्नु भएन ।
पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा उथलपुथल हुनसक्ने घटना घट्नु पूर्व पार्टीको कुनै निकायबाट निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्नु भएन । नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणका निम्ति सामान्य अवस्थाको भन्दा फरक वैधानिक व्यवस्था र दस्तावेजहरु तयार गरिएको थियो । जस्मा पार्टीको नेतृत्व गर्न दुई अध्यक्ष प्रणाली लागु गरियो । त्यसैगरी केन्द्रीय तहका पार्टी कमिटीहरुको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने व्यवस्था भयो ।
एकीकरण भएको दिनदेखि एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म सबै बैठकहरु सहमति र समझदारीमा संचालन गर्ने र सहमतिकै आधार निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यति मात्र होइन आधिकारिक पत्राचार र निर्देशन जारी गर्दा पनि दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यी सबै व्यवस्था राखिनुको एउटै कारण, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि र स्कूलीङबाट विकसित भएका पार्टीहरुको एकीकरण सम्बेदनशील हुन्छ र पार्टी नेताहरुको व्यवहारबाट सम्वेदनशीलतामा आँच नआओस र पार्टी एकीकरणमा बाधा उत्पन्न नहोस भन्ने नै थियो । तर विगत एक वर्षदेखि पार्टीमा एकीकरणको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म चरम गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापहरु भए । यो गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापमा सचिवालयका सबै कमरेडहरु यो वा त्यो पक्षबाट सामेल हुने स्थिति बन्यो ।
विवादका विषयहरु पार्टी एकीकरणका वेला गरिएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयन नहुनु, पार्टी घोषणापत्रको आधारमा नीति कार्यक्रम र बजेट नआउनु र सरकारले गर्ने राजनीतिक निर्णयहरुमा पार्टी नेतृत्वसंग परामर्श नगर्नु आदि थिए । तर ती सबै पार्टीका आन्तरिक विवादका विषयहरु थिए । अधिकांश विषयहरु कार्यशैलीसंग सम्बन्धित थिए । नेतृत्वदायी पार्टी कमिटीमा मौखिक छलफलबाट मात्र गम्भीरता आउन नसकेको महशुस गर्दै लिखित दस्तावेजहरु र प्रतिदस्तावेजहरु प्रस्तुत गरिए ।
ती दस्तावेजहरुमा गम्भीरतापूर्वक कहिल्यै छलफल हुन सकेन । एक आपसमा मनमुटाव झनझन बढेर जान थाल्यो र आखिरमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसका विरुद्ध प्रतिनिधिसभाको विघठनसम्मका दुर्घटनाहरु हामी अहिले वेहोरिरहेका छौं । अहिले औचित्य पूष्टी हुने एउटा पनि कारण विना पार्टी विभाजन गर्न कमरेडहरु लागि रहनु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन उपर गम्भीर छलफल चलिरहेकै अवस्थामा एकथरी नेताहरु निर्वाचन भएरै छोड्छ भन्दै सभा गरिरहनु भएको छ भने अर्काथरी नेताहरु प्रतिनिधिसभा जसरी पनि पुनस्थापना गरिछोड्छौं भन्दै विरोध सभाहरुबाट सडक तताई रहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) एकता राष्ट्रिय अभियानको नाममा विभाजनलाई रोक्न र त्यसका लागि राष्ट्रव्यापी दवाव सिर्जना गर्न यो अभियान संचालन गरिरहेका छौं । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा संगठीत रुपमा अभियान संचालन गर्दा बढि प्रभावकारी हुने देखेर तदनुरुप हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामीलाई विश्वास छ, दुइतिर बाँडिएका हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुले पार्टी पुनर्एकीकरण गर्ने हाम्रो आह्वानलाई सम्मान गर्दै साथ दिनुहुनेछ ।
एकता अभियानको मूल उद्देश्य विभाजित हाम्रा दुबै समूहलाई पुनः एकतामा ल्याउनु हो । यसका साथै पहिले एकतामा आउन नसकेका र छरिएर रहेका विभिन्न कम्युनिष्ट तथा वाम–प्रगतिशील समूह एवं व्यक्तिहरुलाई पनि यो अभियानमार्फत् एकतावद्ध गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । हामी कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु कुनै पनि विषयवस्तुको उठान, त्यसको व्यापकता र परिणामुखी क्रियाशीलताका निम्ति व्यक्तिगत रुपमा भन्दा सामूहिक प्रयत्नमा विश्वास राख्दछौँ । आजसम्म यो आन्दोलनमा जे–जस्ता उपलब्धी हासिल भएका छन्, ती सबै सामूहिक पहलकदमीका परिणाम हुन् र यो आन्दोलनमा जहाँ–जहाँ क्षति भएका छन्, ती सबैका कारक व्यक्तिवादी गलत कार्यशैली नै हुन् ।
विभाजनका मुल कारणहरु कार्यशैली भन्दा अरु छैनन् । कार्यशैलीसंग रहेका अन्तरविरोधहरु मित्रतापूर्ण हुन्छन् । तर ती अन्तरविरोधहरुलाई व्यवस्थापन गर्न हामी असफल भयौं । मित्रतापूर्ण अन्तरविरोधहरुलाई पार्टीभित्रै समाधान गर्नुको बदला बढाई चढाई सार्वजनिक गरियो । अहिले पनि हाम्रा वीचका अन्तरविरोधहरु चरित्रगत रुपमा मित्रतापूर्ण नै छन् । तर सभा, समारोह, आन्दोलन आदि ठाउँहरुमा भयंकर शत्रुतापूर्ण देखाउने गरी बढाइ चढाइका प्रयास भइरहेका छन् ।
विभाजनमा सरिक कमरेडहरुलाई मित्रतापूर्ण र मर्यादित व्यवहार प्रस्तुत गर्दा पार्टी पुनः एकतामा आउँछ कि भन्ने डर लागेको त होइन ? भन्ने शंका पार्टीका सहयोगी र शुभचिन्तकहरुलाई लाग्न थालेको छ । के जसरी पनि विभाजन गरेर नेपाल राष्ट्रको हित हुनसक्छ ? जसरी पनि विभाजन गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हित गर्छ र यसो गरेर के संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समृद्ध हुनसक्छ ?
दुबैतिर लाग्नु भएका मुख्य नेतासहितका कमरेडहरुलाई आह्वान गर्छौ कि तपाइहरुको, हाम्रो र करोडौं नेपाली जनताको उज्वल भविष्यसंग सम्बन्धित बनेको हाम्रो पार्टीको एकतालाई जोगाउन हर किसिमका पर्यत्न गर्न हामी तयार होऔं । शत्रुसंग लडाई गर्दा गोलाबारुद र विध्वंशबाट शक्ति आर्जन हुन सक्छ तर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न विध्वंश वा अनेकताबाट होइन, सिर्जना र एकताबाट मात्र शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यसोभएर कमरेडहरु ज्यादै उज्वल सम्भावना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकतालाई जोगाएर शक्ति आर्जन गर्न र सुदृढ गर्न दिलोज्यान दिएर लागि परौं !!
पार्टीको सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा, तात्कालिक कार्यनीति, विदेश मामिला, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको दिशा तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्ने लक्ष्यमा कुनै मतभिन्नता नहुँदा नहुँदै पनि नेकपाको यो विभाजन हुन पगुको छ । व्यक्तिवादी कार्यशैली व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विकसित हुन्छ । यस्ता कार्यशैलीबाट उत्पन्न अन्तरविरोध आलोचना आत्मालोचनाबाट समाधान गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ सही तरिकाले आलोचना गर्न नसक्दा र आलोचनालाई मित्रतापूर्ण रुपमा लिन नसक्दा पनि अन्तरविरोधमा जटिलता देखिन सक्छ ।
यस पटक पार्टीमा यो अन्तरविरोध यसकै कारण पनि देखापरेको हो । यस्तो अवस्थामा धैर्यतापूर्वक र मित्रतापूर्ण तरिकाले आलोचना गर्ने र कुनै पनि विषयलाई वारको पार पुग्नु पूर्व नै सहमति र सम्झौताबाट पनि समाधान गर्न सकिन्थ्यो । यस पटक पार्टीमा दुबै अध्यक्षबाट फरक फरक प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरिए । ती प्रस्तावहरु पार्टी एकताको मूल्यमा फिर्ता लिन सकिन्थ्यो । तर नेताहरुले त्यसो गर्न सक्नुभएन जस्को कारण नेपाली जनताको उज्वल भविष्यसंग सम्बन्धित प्रभावकारी शक्तिशाली साधनका रुपमा रहेको पार्टी नै विभाजित हुने अवस्थामा पुग्यो । तर यो अवस्थालाई गम्भीरता पूर्वक ग्रहण गर्न तयार हुने हो भने आरोप–प्रत्यारोप प्रस्तावहरु फिर्ता लिदैं आलोचना र आत्मालोचनाको माध्यमबाट पार्टी पुनर्एकीकरण गर्न सकिन्छ ।
पार्टी पुनर्एकीकरणको हाम्रो योजना अहिलेका लागि दुई चरणको हुनेछ । पहिलो चरण हो, सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआउँदासम्मको र दोस्रो चरण हो, सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि । यी दुबै चरणमा एकीकरणका विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल गरिने छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएमा वा निर्वाचन भएमा दुबै अवस्थामा भिन्न–भिन्न केन्द्रअन्तर्गत पार्टी सञ्चालन र कार्यगत एकताको आधारमा निर्वाचनमा सामेल हुने, सरकार संचालन गर्ने अवसर प्राप्त भएमा संयुक्त सरकार संचालन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिने छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न बराबर संख्याका समन्वय समितिहरु विभिन्न तहमा निर्माण गरिने छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनसर््थापना पछि पनि पार्टी एकीकरण हुन नसकेमा हाम्रो पार्टी एकता अभियान निर्वाचन काल र त्यसपछि पनि निरन्तर जारी रहनेछ । फरक–फरक नाममा विधिवत् आ–आफ्ना पार्टी सञ्चालन गरिएको अवस्थामा पनि मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै पार्टी एकीकरणका निम्ति अथक प्रयत्न गरिनेछ । तब पनि पार्टी एकीकरण हुनसकेन भने एकता राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ ।
पार्टी विभाजनको यो क्षण दुःखदायी त छँदैछ, त्यसमाथि यस्तो स्थितिमा दुबै समूहका नेता–कार्यकर्ताबीच एकापसमा व्यक्तिगत तहमै दोषारोपणको श्रृंखला देखिन थालेका छन् । ती कमरेडहरु एकापसमा जायज वा नाजायज विषय उठान गर्न, जाती, भाषा, वर्ग, लिंग र समुदायलाई इंगित गर्दै कतिपय गम्भीर मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल नगरी टीका–टिप्पणी गर्ने सिलसिला पछिल्लो समय व्यापक बनिरहेको छ ।
पार्टी एकता अभियानका हामी कमरेडहरु पार्टी एकता हुन सकेन र उपरोक्त आरोप–प्रत्यारोप रोकिएन भने अझ निम्नस्तरका दुर्घटनामा जानसक्ने खतरा महशुस गरिरहेका छौं । अहिलेको विभाजन मानि लिउँ आकाश र जमिनको जस्तै फरक हो वा दुइ धु्रवमा विभाजित जस्तै हो भन्ने व्यवहार कहिल्यै पनि उचित हुँदैन । आज हामी मिल्न सकेनौ यसो भन्दैमा जीवन रहँदासम्म मिल्ने छैनौं भन्न सकिन्छ र ? त्यसोभएर आज एउटा अवस्थामा मिल्न सकेनौं, भोली अर्को अवस्थमा नमिली नहुने स्थिति हुनसक्छ ।
त्यसोभएर एकता अभियानका हामी सम्पूर्ण अभियन्ताहरुले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै विभाजित भएका दुबै समूहका नेता तथा कार्यकर्ता र समर्थक शुभचिन्तकहरुलाई विनम्र हुन, आरोप–प्रत्यारोपमा सामेल नहुन, कुनै पनि अवस्थामा गालीगलौज नगर्न, सकिन्छ भने आत्मालोचक बन्न विनम्र अनुरोध गर्दछौं । साथै एकता अभियानका सम्पूर्ण कमरेडहरुले आफुले पनि कसैको विरोध नगरी सबैसंग विनम्रतापूर्वक मर्यादित व्यवहार गर्नुहुनेछ । अहिले निम्नानुसारका आचारसंहिताका सूत्रहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक रहेको अवस्थामा पनि नेपालका परिवर्तनकारी जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई अमूल्य मत प्रदान गरी अत्यधिक बहुमतसहितको सरकार बनाउन र शक्तिशाली संगठनका रुपमा स्थापित गर्न ऐतिहासिक योगदान पु¥याएका हुन । जनताको यो अपार समर्थनमा धेरै धेरै आशा र विश्वासका किरणहरु रहेका छन् । तर पार्टी विभाजनको क्रियाकलापले उनीहरुको आशा र विश्वासमा ठूलो धक्का पुगेको छ । विभाजनका कारण नेपालको संविधान बमोजिम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यभारबाट नेपाली जनता बञ्चित हुने अवस्थासमेत सृजना भएको छ । त्यसोभएर पार्टीलाई पुनः एकीकरण गर्न नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा संगठीत रुपमा जुट्नुहोस् ! तपाईहरु जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहीँ नेकपा एकता अभियानको नाममा संगठन खडा गर्नुहोस् । विभाजनमा लागेका कमरेडहरुलाई पुनः एकीकृत हुन अनुरोध गर्नुहोस् । तर, कुनै पनि समूहमा रहेका नेता तथा कमरेडहरुलाई गालीगलौजको शैलीमा विरोध नगर्नुहोस् । सबैलाई सम्मान गर्ने, कसैलाई पनि अपमान नगर्ने समाजवादी शैली अपनाउनुहोस् । सामाजिक दुरी कायम गर्दै कोरोना महामारीबाट बच्न प्रत्येकले मास्क लगाएर एकता ¥यालीमा सहभागी हुनुहोस । एकताको सन्देश दिने पर्चा पोष्टर छापेर बाँड्नुहोस् । एकतालाई पक्षपोषण गर्नेखालका लेख, रचना, गीत पत्रिका र अनलाइनमा प्रकाशन गर्नुहोस । एकतासम्बन्धी अन्य विषयबस्तुलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रेषित गर्नुहोस् । यसो गर्नुभयो भने प्रिय कमरेडहरु हाम्रो प्यारो पार्टी र पार्टीका सबै आदरणीय नेताहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिनेछ र पार्टीलाई पुनः एकीकरण गर्न सकिनेछ ।